Uhambo Olukhulu - UMongameli Kikkoman Zhenji Foods Co, Ltd.
Ubuchwepheshe obuphezulu beSoy Sauce Brewing Technology
Izithako ze-soy sauce ezinosawoti omningi ziyizithako ze-soymeal ezingezona neze-GMO nokolweni we-soya wethu. Isoso lethu le-soy livuthwa ngaphezulu kwezinyanga ezimbalwa ngendlela yendabuko kanye nemishini yesimanje, edume ngokunambitheka kwayo okucebile nokunambitheka okuhle kakhulu.
Kuhlanganiswe isipiliyoni sethu sokukhiqiza ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu beKikoman, singenza i-soya esezingeni eliphakeme ngempela.
Inqubo yokuphisa uviniga nge-Fermentation efakwe emanzini, ine-patent ephezulu kakhulu yobuchwepheshe bokuviniga yokusungula.
Ubuchwepheshe obufakwe ngaphansi kweviniga ukucwilisa ubuchwepheshe besimanje beviniga ukuvutshelwa, inkampani yethu iyinkampani ehamba phambili maqondana nobuchwepheshe bokukhiqiza nemishini.
Ngokuthola ubuchwepheshe bokuphisa bokwethuswa kwangaphambili nobucwaningo emazweni ethu, sihlanganisa nokuqonda kwethu okuningilizayo ngesiko lase-China elenziwa ngamakhemikhali, sizoqhubeka nokukhulisa nokukhiqiza ukuthandwa okwengeziwe kwamakhasimende ethu.
Silwela njalo ukuphepha nekhwalithi ephezulu.
Silwela njalo ukuphepha nekhwalithi ephezulu ukuze uthole ukuzethemba kwamakhasimende okuphelele kumikhiqizo yethu nezinsizakalo zethu.
Sifeza uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ngokuqinile ngaphandle kokuyekethisa, sinikezela ngokulawulwa okuqinile kokukhiqizwa kwenqubo yokukhiqiza, ukuhlolwa okuningi kunoma iyiphi impahla eluhlaza ngaphambi kokulethwa, ukuhlolwa kwe-physicochemical nokuqapha okufika ngesikhathi kuzo zonke izinqubo zokukhiqiza, kanye nokusebenza okujwayelekile kwabasebenzi kumkhiqizo ngamunye umugqa.
Selokhu kwasungulwa, sithole izitifiketi eziningi zasekhaya nezamazwe omhlaba, kufaka phakathi i-ISO9001 (Uhlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi), i-FSSC22000 (Uhlelo Lokuphathwa Kokuphepha Kwezokudla), ISO14001 (Uhlelo Lokulawulwa Kwemvelo), i-KOSHER (Isiqinisekiso Sokudla Kosher), isitifiketi esingeyona eye-GMO Certification Yesondlo , I-HALAL (IHALAL Certification Food Certification ekhishwe yi-Islamic Association of Shandong ne-MUI), njll. Ekuthengweni kwempahla, ukukhiqizwa, ukuthengiswa kanye nezinye izixhumanisi zomsebenzi, ngokuhambisana nezidingo zohlelo lokuthola isitifiketi, ungalokothi wehlise umoya. NgoMeyi 2020, le nkampani yahlolwa yiSMETA yi-SGS, okubuye yathuthukisa ukuncintisana kwayo emakethe yamazwe omhlaba.